I Var dia departemanta frantsay ao aminny faritra Provence-Alpes-Côte dAzur. Ny renivohitrilay departemanta dia Toulon. Ny anaranilay departemanta dia avy aminny renirano Var mamaritra ny sisintany atsinanana taloha fa tsy ankehitriny intsony. Ny ...
Île-de-France dia faritra frantsay isay isianny renivohitri Frantsa, Paris. Io faritany io no be mponina indrindra ary mamoa-karena indrindra ao Frantsa ary faritra mamoa-karena indrindra ao Eoropa. Ao aminny tanàn-dehibeni Paris no misy ny 90 is ...
Ny Loksamborga na grand-duché de Luxembourg, dia firenenny vondrona Eoropeanina eo anelanelanny Alemaina, ny Belzika sy ny Frantsa. Ny isam-ponina any Loksamborga dia 493 500 taminny Janoary 2009. Anisanny firenena namorona ny Vondrona Eoropeanin ...
Ny Nederlandy dia firenena any Eoropa Andrefana. Mihoatra ny 17 tapitrisa ny olona miaina ao. Ho any avaratra sy andrefanny Nederlandy dia ny Ranomasina Avaratra. any atsinanana dia ny Alemaina ary any atsimo dia Belzika. Ny Nederandy dia iray am ...
Alexandre Chargueï dia injeniera mizaka ny zom-pireneni Firaisanny Repoblika Sosialista Sovietika teraka ny 21 Jiona 1897 ary maty ny 25 Febroary 1942
I Grygorij I. Shevchenko no rainy. Ny rahalahiny sy/na ny rahavaviny dia Yasmin G. Boiko, Kateryna G. Krasytska, Joseph G. Shevchenko, Mykyta G. Shevchenko.
52.40833°N 16.934167°E ﻿ / 52.40833; 16.934167 I Poznań dia tanàna ao aminny faritanini Voïvodie Wielkopolska fiteny poloney: Województwo wielkopolskie ny Polonia. Manana mponina miisa 541 561 mponina
Madera dia tambanosy portogey ao aminny Ranomasimbe Atlantika. Ny nosy lehibe indrindra ao aminny tambanosini Madera. Faritany miazaka-tena i Madera ary i Funchal no renivohitra. Noho izy ani Portogaly, mpikambana ao aminny Vondrona Eoropeana ny ...
Radoje Domanović dia mpanoratra serbianina, mpanao gazety sady mpampianatra, ny sombin-tantara manesoeso no nampalaza azy.
"Saturday" 2010 "Dream on the Dancefloor" 2012 "I Promised Myself" 2009 "Vifta med händerna" 2006 "Every Morning" 2009 "Elinor" 2013 "Fest i hela huset" 2011 "Walk on Water" 2009 "Northern Light" 2012 "I Miss You" 2008 "Hallå där" 2006 "Jingle Be ...
Stockholm dia renivohitra ary tanàna ngeza indrindra ani Soeda. Ao no misy ny governemanta sy ny antenimierani Soeda ary ny lapa ipetrahanny mpanjaka Charles XVi Gustave. Ny tanànani Stockholm Stockholms stad na "kaominini Stockholm" Stockholms K ...
Roger Federer dia olom-pirenena soisa mpilalao tenisy matihanina. Maro ireo zava-bitany tsara indrindry maneran-tany eo aminio taranja io. Anisanizany ohatra ny nitazomany ny laharana voalohany tao aminny laharana ATP nandritry ny herinandro 309, ...
I Soisa no anarana mahavantana iantsoana ny "Confœderatio Helvetica", anarana entinny firenena Confédération Suisse, firenena any aminny kaontinanta Eoropeana izay fefeni Alemana, i Frantsa, i Italia, i Aotrisy ary i Liechtenstein. Efatra ny fite ...
Queensland dia faritany mizaka-tena faharoa lehibe indrindra ao Aostralia, ary fahatelo aminny isam-ponina. Ao avaratra atsinanani Aostralia no misy azy, ary ny faritany manodidina azy dia ny Faritany Avaratra any andrefany, ny faritanini Valesa ...
Acre dia faritany mizaka-tena any brazilianina ao avaratri Brazila. Ny fiavianilay anarana Acre dia avy aminny renirano izay miampita ny renivohiny Rio Branco, ny Rio Acre. Acre no anisanny tany lasa brazilianina farany tao Brazila. Nisitaka tami ...
15.934440°S 50.140280°W ﻿ / -15.934440; -50.140280 I Goiás dia faritany mizaka-tena ao Brazila, izay eo aminny faritra afovoanny firenena. Ny teny Goiás izay Goyaz taloha dia avy aminny anaranny mponina teratany eo an-toerana. Ny teny tena niavia ...
Tocantins, dia anisanny faritany mizaka-tena ao Brazila. Noforonina taminny 1988 io faritany io avy aminny singa avaratri Goiás. Natomboka taminny 1989 ny fanorenana ny renivohitra vaovao, Palmas, na dia maro aza ireo tanàna naorona taminny fanja ...
Ny Kerala dia faritany mizaka tena any atsimoni India. Any atsimo andrefani India ny misy azy. Manana tenim-pirenena iray manendrika azy ny Kerala ; ilay tenim-pirenenany dia fiteny malayalam ; aminny fianankavianny fiteny diravidianina io fiteny ...
Ny fiteny gojaraty dia fiteny indo-ooropeanina any India. Io ny fitenny tompontanini Gujarat. Misy olona 46 tapitrisa no miteny gojaraty any India sy maneran-tany. Ny fiteny Gujarati no tenin-drenini Mohandas Gandhi, i Ali Jinnah ary i Sardar Val ...
Ny fiteny sanskrity na sanskrita (संस्कृतम / saṃskr̥tam ny anarany aminny fiteny indô-eorôpeanina ao aminny fianakaviam-piteny indo-arianina any India. Misy teny mbola ampiasainny fianakavina Bramàna sy sekoly spiritoalista. Ny manam-pahaizana in ...
Ny fiteny tamily dia fitenny mponina tamil. Ny fiteny tamil dia fiteny any India. Ny fiteny tamil dia teny ofisialinny Tamil Nadu sy ny tananani Pondichery sy karîkâl. Teny ofisialy any Singapaoro ihany ko any fiteny tamil. Olona 74 tapitrisa mah ...
Ny famakiana kun ny kanji iray dia ilay kanji avy aminy teny japoezy ; taminy nantongavanny soratra sinoa nakany Japana, ny sinôgrama niasa nandika an-tsoratra ny teny japonezy. Satria ny Kanji Ideôgrama, mampizotra fika iray izy, fa tsy feo iray ...
Ny Furigana na Yomigana dia kana voasoratra eo akaiky ny kanji mba afatarananny fitenenana azy ; Satria afaka andraisana an-tsoratra daholo ny teny japônezy. Anatiny soratra voasoratra ambony mihidina ambany, ny furigana misoratra any ankavananan ...
Ny Gakunenbetsu kanji haitōhyō dia lisitra ny kanji 1.006 vita sy voakarakaranny ministera ny fianarana japoney. Ny Gakunenbetsu kanji haitōhyō manomeha ny kanji tokony fantatra ny mpianatra japoney aminy farany taona ny fianarana primary. Ny ana ...
Ny Hiragana dia syllabaire Japoney ary anisanny fomba fanoratana ny fiteny japoney miaraka aminny katakana sy ny kanji. Ny hiragana dia avy amina kanji mitovy feo. Afaka soratana tsara aminny soratra hiragana ny fiteny japoney tsy misy fahamaizin ...
Lisitry ny Jinmeiyō kanji 290 japonezy: 丑　丞　乃　之　也　亘　亥　亦　亨　亮　伊　伍　伎　伶　伽　佑　侃　侑　倖　倭　偲　允　冴　冶　凌　凜　凪　凱　勁　匡　卯　叡　只　叶　吾　呂　哉　唄　啄　喬　嘉　圭　尭　奈　奎　媛　嬉　孟　宏　宥　寅　峻 ...
Ny kanji 漢字 dika sinoa-japônezy ; hànzì aminy teny sinoa dia sinograma 字 avy any aminy taona Han 漢 miasa aminy teny Japônezy ary voahindrana taminy Sinoa
Ny tōyō kanji dia ny kanji voalohany lasa ofisialy ozy ny ministera ny fianarana Japônezy taminy 16 Novambra 1946 Nataoni Ministera kely ny kanji tokony ianarana mba tsy ho sarotra ianarana ilay izy misy kanji aminarivo no tokony ianarana ; misy ...
Ny か aminny hiragana na か aminny katakana dia vaninteny iray ao aminny "abidy" japoney voasokajy aminny kana. Ireo kana roa ireo dia samy midika. Avy aminny manyogana 加. Afaka asiana dakuten io soratra io, mba hanome が aminny hiragana, ary ガ ...
Ny き aminny hiragana na キ aminny katakana dia vaninteny iray ao aminny "abidy" japoney voasokajy aminny kana. Ireo kana roa ireo dia samy midika. Avy aminny manyogana 奈. Afaka asiana dakuten io soratra io, mba hanome ぎ aminny hiragana, ary ギ ...
Sung Jae-ki dia mpanao hetsika ho anny Zonolombelona, zo sivika ary filôzôfy ny liberalisma ao Korea Atsimo. Namorona ny Lehilahini Korea, izy taminny taona 2008.
I Yun Hyon-seok, teraka taminny 7 Aogositra 1984 tany Byupyong, Incheon any Korea Atsimo - 26 Aprily 2013 any Dongdaemun, Seoul any Korea Atsimo, dia mpanao Human right activists and Civil right activists, Gay Poeta, writer ao Korea Atsimo. nickn ...
Ny Tsimihety dia ny foko any amin ny faritra avaratra amin i Madagasikara, ao amin ny faritanin i Mahajanga, hodidinin ny tan ny Antakarana avy ao avaratra, ny Betsimisaraka avy ao atsinanana, ny Sihanaka avy ao atsimo ary ny Sakalava avy ao andr ...
Faritra Amoroni Mania
Ny Faritra Amoroni Mania dia iray aminireo faritra 22 eto Madagasikara. Ao aminny tapany afovoanny Nosy, ao aminny Faritanini Fianarantsoa no misy azy. Ambositra no renivohiny. I Mania dia renirano ao avaratrAmbositra, mianga avy any aminny farit ...
Zotra Fianarantsoa-Côte Est
﻿Ny zotra Fianarantsoa-Côte Est, na FCE, dia zotran-dalamby ao Madagasikara mandalo aminny tanànani Fianarantsoa aminny morontsiraka atsinananny Nosy, ary indrindra ao Manakara, izay ao aminny faritanini Fianarantsoa ihany koa. Mitondra ny anaran ...
Ny Faritanin i Toliara dia anisan ireo faritany enina eto Madagasikara. Izy no faritanin i Madagasikara lehibe indrindra raha ny velarana no jerena; any amin ny tapany atsimo-andrefan ny nosy no misy azy; misy ny seranan-tsambo ao amin ny lakandr ...
Ny Faritra Atsimo-Andrefana no faritra lehibe indrindra aminny velarantany eto Madagasikara izay any aminny tapany atsimo andrefanny Nosy. Ao aminny Faritanini Toliara no misy azy.
Ny faritra Atsimo-Atsinanana dia mizara ho distrika dimy, izay mitsinjara ho kaominina 90 Distrikani Midongy-Atsimo Distrikani Farafangana Distrikani Vangaindrano Distrikani Befotaka Atsimo renivohitry ny distrika: Befotaka Distrikani Vondrozo
Mizara ho distrika fito ny faritra Atsinanana ary i Toamasina no renivohitry ny faritra. Distrikani Vatomandry Distrikani Mahanoro Distrikani Brickaville Distrikani Toamasina II Distrikani Toamasina I Distrikani Marolambo DistrikanAntanambao Mana ...
Misy distrika dimy ny faritra ary i Morondava no renivohitra. Distrikani Morondava Distrikani Belo-Tsiribihina Distrikani Mahabo Distrikani Manja Distrikani Miandrivazo
Vatovavy-Fitovinany dia mizara distrika enina, izay mitsinjara ho kaominina 122. Distrikani Vohipeno Distrikani Manakara Distrikani Mananjary DistrikanIfanadiana DistrikanIkongo Distrikani Nosy Varika
Mizara ho distrika fito ny faritra DistrikanAmbalavao Distrikani Lalangina DistrikanIsandra Distrikani Vohibato Distrikani Fianarantsoa DistrikanIkalamavony DistrikanAmbohimahasoa
Antoko politika malagasy
VVS:1913 Vy Vato Sakelika PDM Parti Démocratique de Madagascar PICM Parti du Congrès de l’indépendence de Madagascar PSD Parti social-démocrate RNM TIM Tiako i Madagasikara UNDD Union nationale pour la démocratie et le développement MFM Miaro ny ...
Pôlitika ao Madagasikara
I Madagasikara dia repoblika ahitana antoko pôlitika miisa telonjato mahery. Ny filoha no mitondra ny firenena ary ny praiminisitra no mitondra ny governemanta. Ny governemanta no mampihatra ny lalàna.
Rotaka taminny taona 2009
Misy rotaka mandoro any Madagasikara taminny sasaka faranny volana Janoary 2009. Mifanohitra Andriamatoa isany Beny Tanànan Antananarivo Andry Rajoelina sy ny Filoham-pirenena Malagasy Marc Ravalomanana. Miteny Andriamatoa Andry Rajoelina fa hoe ...
Ny Guangxi dia faritany mizaka-tenanny Repoblika Entim-bahoakani Sina. Ny anarany ofisialy dia Zhuang-ni Guangxi, fa ampatelonny isam-ponina any Guangxi fotsiny ny isanny olona manan-drazana Zhuang. Any atsimoni Sina no misy ny faritani Guangxi, ...
Seranam-piaramanidina Iraisam-pirenenani Tunis-Carthage
Ny Seranam-piaramanidina Iraisam-pirenenani Tunis-Carthage dia seranam-piaramanidina iraisam-pirenena iray any Tonizia. Valo kilometatra any avaratra andrefani Tunis ny misy azy. Nosokafana taminny 1940 izy. Mitondra ny anarani Carthage ilay sera ...
Istanbul dia renivohitra ara-toe-karen i Torkia izay eo aminny lafy eorôpeanin i Torkia. Istanbul no tanàna eorôpeanina lehibe indrindra amin ny lafiny isa-mponina ary tanàna fahatelo lehibe indrindra amin ny lafin ny velarantany. Io tanàna io no ...
Ny Afovoany Atsinanana na Azia Andrefana dia ny faritra atsimo andrefan i Azia, miampy an i Ejipta. Ireo firenena ao Azia Andrefana dia i Arabia Saodita, i Iràka, i Iemena, i Omàna, i Iràna, i Siria, i Jordania, i Ejipta, i Israely, i Palestina a ...
I Azia Atsimo-Atsinanana dia ny faritr i Azia any atsinanan i India ary any atsimon i Sina. Ireo firenena izay lazaina fa ao Azia Atsimo-Atsinanana dia i Myanmara, Tailandy, Malaizia, Indônezia, Filipina, Vietnamy, Laôsa, Brunei Darussalam ary Ka ...